Abawo, a wɔsan frɛ no awokyem ne awo, yɛ awiei a wɔde ba nyinsɛn mu a nkokoaa biako anaa nea ɛboro saa fi awotwaa mu. Wɔ afe 2015 mu no, wɔwoo nkokoaa ɔpepem ɔha aduasa anum wiase nyinaa. Wɔwoo bɛyɛ ɔpepem dunum ansa na nnawɔtwe aduasa asɔn soe, na efi ɔha mu nkyekyem abiɛsa kosi dumien nso na wɔwoo wɔn wɔ nnawɔtwe aduanan abien akyi. Wɔ aman a wɔanya wɔn ho mu no, wogye awo dodow no ara wɔ ayaresabe bere a wɔ aman a wonni bi mu no, wogye awo dodow no ara wɔ fie wɔ awo mu aboafo hwɛ ase.
Yɛ yi fii "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Abawo&oldid=69279"
Nsesae ba kratafa yi so da 7 Ɔbɛnem 2022, mmere 17:24.